Eternals ကောင်းကင်ဘုံမိသားစုသစ်ပင် Marvel မျိုးရိုးအပြည့်အစုံ
Avengers နှင့် Guardians of the Galaxy တို့ကို ကျော်လွန်၍ MCU သည် Eternals and Celestials တို့နှင့်အတူတည်ရှိသောမိသားစုသစ်ပင်တစ်ခုတွင်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုအတိအကျ? http://Ekster.com/NewRockstars မှာ Ekster စမတ်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုနောက်ထပ် ၅% လျှော့စျေးအတွက်ပရိုမိုကုဒ် ROCKSTARS ကိုသုံး
Subscribe: http://bit.ly/SubNewRockstars | တွန်းအားပေးသတိပေးချက်များအားလုံးကိုဖွင့်ပါ
🔔နောက်ဆုံးပေါ်ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ပါ။ https: //www.youtube.com/playlist? list ...
Eternals နောက်တွဲသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ဖုံးကွယ်ထားသော Eternals ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်၊ သို့သော်ဤ superheroes များသည် Celestials မှလူသားများ၏မျိုးရိုးနှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်သနည်း။ Mutant တွေဟာဒီသမိုင်းမှာဘယ်လိုအတိအကျကိုက်ညီလဲ။ Erik Voss သည် Eternals, Avengers, Celestials, Guardians of the Galaxy, Asgardians, Celestials, Kree, Skrulls, Imhumans, and MUTANTS တို့အပါအ ၀ င် Marvel ဘိုးဘေးမိသားစု၏သစ်ပင်အပြည့်ကိုဖြိုဖျက်သည်။
New Rockstars သည်လူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှုများကိုအဆုံးသတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုထောက်ခံသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်ရုန်းကန်နေရသူများကိုကူညီပါ၊ https: //secure.actblue.com/donate/ms _...
New Rockstars Follow:
Facebook: https: // facebook .com/NewMediaRockstars
Movie/TV Breakdowns: https: //youtube.com/playlist? list = PL4 ...
News & Theories: https: // youtube ။ com/playlist? list = PL4 ...
Trailer Breakdowns: https: //youtube.com/playlist? list = PL4 ...
နောက်ဆုံးပေါ်ဗွီဒီယိုများ: https: //www.youtube.com/playlist? list ...
အများစု နာမည်ကြီး: https: //www.youtube.com/playlist? list ...
New Rockstars အကြောင်း
အားလုံးဘဲ၊ တရားဝင် New Rockstars YouTube channel မှကြိုဆိုပါသည်။ အင်တာနက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဂရုစိုက်သည့်အရာကိုဖုံးလွှမ်းသည်။ Marvel မှ Walking Dead အထိ၊ Rick နှင့် Morty မှ Stranger Things၊ James Bond မှ Star Wars နှင့်အခြားအရာများ မင်းကြိုက်နိုင်မယ့်ရုပ်ရှင်နဲ့တီဗီရှိုးတိုင်းမှာငါတို့မင်းကိုလွှမ်းခြုံထားတယ်။ သင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ကွဲခြင်း (သို့) သီအိုရီကိုလက်လွတ်မခံနိုင်အောင်တွန်းအားပေးသတိပေးချက်များအားလုံးကိုဖွင့်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
ထုတ်လုပ်သူ: Brandon Barrick
Marvel ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ဇယားအချိန်ဇယား Loki ဌာနခွဲအားလုံးပြိုကွဲသွားသည်။
Marvel Universe: သမိုင်း (ပုံပြင်အပြည့်အစုံ)
Galactus သည်ကောင်းကင်ယံထက် ပို၍ အစွမ်းထက်သည်
Marvel Studios 'Eternals: ပထမ Trailer မှဇာတ်လမ်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ နက်နဲသော်လည်းမတိမ်ပါ။
Phase4ကထုတ်ဖော်ပြသမည့် Marvel Villains ၁၈ ယောက်
AVENGERS: Ultron ဘာကြောင့်မှန်တယ် (Scarlet Witch အကြောင်းသိတယ်။ )
Thanos သည် Deadpool ထာဝရအသက်ကိုဘာကြောင့်ပေးခဲ့သနည်း
SHANG CHI Beacon သည်လူမျိုးစုံအတွက်လား။ Spider-Man No Way Home + Loki + What If!
အာကာသနတ်ဘုရား ၂၄ ပါး Celestials တွေရဲ့မူလအစအကျဉ်းချုပ် !! ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
AVENGERS ENDGAME တွင် INSANE အသေးစိတ်အချက်အလက်များ MCU ကိုကြည့်ပြီးနောက်သင်သတိပြုမိသည်။ အီစတာကြက်ဥ
အစဉ်အမြဲ Trailer ကို BREAKDOWN! Easter Egg များနှင့်သင်လွဲချော်ခဲ့သောအသေးစိတ်များ
ပါဝါ ၂၀ MCU အက္ခရာများရှိသော်လည်းအသုံးမပြုပါနှင့်
Shang Chi FULL Breakdown: Avengers5Marvel Easter Eggs နှင့်သင်လွဲချော်သောအရာများ
LOKI: MCU တွင် Kang အကြောင်းကို Iron Man သိပုံကို Marvel ရှင်းပြသည်
Super Soldier Serum အား ၂၀၂၁ တွင်ရှင်းပြခဲ့သည် MCU Lore
Marvel's Eternals ကိုမကြည့်မီဤအရာကိုကြည့်ပါ
Phase5အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ Marvel ဇာတ်ကောင် ၁၀ ယောက်